Sida loo sii qulquli Video ka iPhone / iPad / iPod in TV Apple .
Mar kasta oo markii aan isku dayay in uu sii qulquli photos videos ama aan si Apple TV, waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan in ay ka hor hubiyo. Tusaale ahaan, ma i xidhmaan WiFi la mid ah la TV Apple? Waxa uu ahaa qarnigan Apple TV 3aad? Ama sida loo dhigay ilaa mirroring AirPlay? Waxaa jira tuse faahfaahsan ee Apple Support, si kastaba ha ahaatee, waxaan jeclaan lahaa in la wadaagto hage fudud dheeraad ah halkaan aad u.
Talo: Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida ay u raaxaystaan ​​warbaahinta on TV, hubi hagahan >>
Qeybta 1: AirPlay, AirPlay Mirroring, Peer-fadeed AirPlay
Qeybta 2: Sida loo sii qulquli Video ka iPhone in Apple TV
Qeybta 2: Sida loo sii qulquli Video ka iPad in Apple TV
Qeybta 2: Sida loo sii qulquli Video ka iPod in TV Apple
Marka hore, AirPlay, AirPlay Mirroring, Peer-fadeed AirPlay
Ka dib markii ay ka taagay Apple TV, hadda aad qulquli karaan video ka qalabka macruufka shaashada weyn si toos ah via airplay. Waxaa jira Hanuuniyaa badan iyo talooyin online si ay uga caawiyaan dadka isticmaala. Si kastaba ha ahaatee, u greenhands, faahfaahin badan ma caddeeyo. Tusaale ahaan, waxaad ka AirPlay Mirroring iyo AirPlay Peer-fadeed kala AirPlay? Dhab ahaantii kala duwan u dhigo laba dhinacyo -devices iyo shaqada.
Function: Airplay kuu ogolaanaysaa inaad wirelessly qulquli videos, sawiro, muusig iyo app Safari ee macruufka qalabka iyo Mac shaashada weyn aad. Horena waa dhan hardware waa inay noqotaa inay ka yar isla LAN ah (Local Area Network). Dhammaan Hanuuniyaa online ku xusan waa in ay ka yar isla Wi-Fi, run ahaantii ilaa iyo inta isku LAN ah, wax dhib ah maleh waxa uu ku xiran via WiFi ama dekedda, uu u shaqeeyo.
Qalabka taageerto soo socda:
iPhone 4 (ama ka dib), iPad, iPad mini, ama iPod taabashada (jiilka 4aad ama ka dambe)
Wixii videos ama sawiro: TV Apple (jiilka 2aad ama 3aad)
Wixii music: Apple TV (jiilka 2aad ama 3aad), garoonka diyaaradaha Express, ama AirPlay-karti ku hadla ama qaateyaasha
Function: Halkii AirPlay, AirPlay Morroring buugii karaa bandhigay oo dhan ku macruufka qalabka iyo Mac shaashada weyn aad. Waxa ay taageertaa oo kaliya qaar ka mid ah qalabka macruufka-dhamaadka sare.
iPhone 4s ama ka dib
iPad 2 ama ka dib, iPad mini ama ka dib
Apple TV (jiilka 2aad ama 3aad)
Function: Waxa ay u badan dabacsan badan ee kor ku xusan 2 siyaabo. Peer-fadeed AirPlay ka dhigan tahay dadka isticmaala airplay karaan dhammaan faylasha warbaahinta ee macruufka qalabka shaashada weyn oo aan LAN. Waxaa ku wareejinaya via Bluetooth. Sida inta Bluetooth aaladaha macruufka iyo Apple TV shid, waxaa ku xiri karto si toos ah. Tani waa shaqo aad u fiican qaybsiga waxa aad heshay in iPhone shaashada TV saaxiibo si toos ah.
iPhone 5 ama ka dib, iPad (jiilka 3aad ama ka dib), iPad mini, ama iPod taabashada (jiilka 5-teedii) la isticmaalayo macruufka 8 ama ka dib.
Apple TV (jiilka 3aad rev A, model A1469 ama ka dib) la Apple TV software 7.0 ama ka dib. Ogow TV Apple model aad leedahay.
Marka labaad, Sida loo sii qulquli Video ka iPhone in TV Apple
Waxaan helay iPhone 6 oo jeebka iyo waxaan la wadaagi doonaa jidkii uu u soo qulquli videos aan ka iPhone 6 ilaa Apple TV talaabo talaabo ah.
1. Hubi in aad ku xidhi aad Apple TV shaashada weyn iyo LAN Samee (marka dhigay ilaa Apple TV, marka hore waa in ay doortaan WiFi saxda ah, xusuuso magaca shabakadda haddii aad leedahay wax ka badan hal WiFi guriga), dabadeed kaalay in goobaha ay u shid AirPlay ee soo socda. Oo haddii aad leedahay wax ka badan hal TV Apple, fadlan dooro mid ka mid sax ah.
2. Unlock iPhone 6, tag settings Wi-kale dooran shabakada (ay isla Apple TV waa in) qortaa erayga sirta. Hadda aan iPhone ka yar yahay LAN isla Apple TV.
3. Kaadhkaaga ka hooseysa ugu sareysa, waxaad eegi kartaa haddii ay jiraan button AirPlay ah ee Xarunta Xakamaynta. (Maxaa dhacaya haddii aad arki kari maayo icon AirPlay ah.)
4. Tubada button AirPlay ay u doortaan qalabka - Apple TV in ay sii qulquli in. Hadda fur wax videos in aan iPhone 6, waxay sii qulquli doonaan si ay Apple TV si toos ah. (Eeg waxa la sameeyo haddii aadan arkin qalab aad ee liiska.)
Halkan sida greenhand ah, waxa laga yaabaa inaad qabtid su'aalo dhowr ah:
a. Sida loo isticmaalo AirPlay Mirroring (Ama Peer-fadeed AirPlay)?
Jawaab: Waxaad arki doontaa doorasho Mirroring hoos ku Apple TV doorasho ka dib markii AirPlay qasabadda ee qalabka macruufka. Waxaa Click, ka dibna wax kasta oo aad bandhigay qalab mobile screen weyn ku tusi doonaa isla markiiba.
b. Waxaad kaliya ayaa webigu ku soo videos maxalliga ah iPhone 6 ilaa Apple TV oo ma taqaanaa sida loo sii qulquli online videos in Apple TV?
Jawaab: Waxaa jira 2 fursado aad u - AirPlay Mirroring, Safari App. Waxaad furi kartaa videos online la browser mobile ka dibna dooranayaan AirPlay Morroring sida su'aasha ugu horeysa. Dhammaan videos online qulquli karaan in ay Apple TV si toos ah. Haddii aad isticmaasho app Safari, waxa aad furan kartaa cinwaanka internetka ee Safari, markaas Radidiyaha video ugu horeysay, ka dibna tubbada badhanka AirPlay oo tusi doonaa geeska hoose ee saxda ah ee video shaashada. (In xaaladda labaad, u qaadan in aad telefoon uma isticmaali karo AirPlay mirroring.)
c. Miyey kala duwan yihiin marka il files kale ee warbaahinta sida sawiro, music in TV Apple?
Jawaab: Ma jirto farqi u dhaxeeya videos iyo sawiro. Inkasta oo haddii aad rabto in aad sii qulquli music in TV Apple, waa in aad hubisaa in ay jiraan AirPlay-qaata awood iyo afhayeenka. Haddii qof qaata ama hadle ma taageeri AirPlay, waxaad ka iibsan kartaa Express garoonka diyaaradaha sida plugin. Sidaas darteed, markii il music in TV Apple, aad doorato waa in Apple TV iyo AirPlay-awood aqbalana iyo afhayeenka aad button AirPlay tuubada ka dib.
d. Maxaa dhacaya haddii aan kaliya leeyihiin iPhone 3 / 3GS ama ka hor iyo sida aan qulquli karaan videos in Apple TV?
Jawaab: Dhab ahaantii kaliya AirPlay taageertaa iPhone 4 iyo qalabka ka dib, haddii aad iPhone ma taageeri karaan AirPlay, waxaad kala soo bixi kartaa qaar ka mid ah barnaamijyadooda dhinac saddexaad sida Allcast, taas oo loo qeexi doonaa faahfaahin ka dib.
Mar saddexaad, Sida loo sii qulquli Video ka iPad in TV Apple
Fadlan tixraac tallaabooyinka ay u sii qulquli video ka iPhone in TV Apple. Ujeedada ugu weyn ee kala duwan user iPhone iyo iPad users waa users dambe ka gaabsadeen in ay isticmaalaan AirPlay sida ilaaliyaal u ciyaaro kulan video yihiin.
Mar afraadka, Sida loo sii qulquli Video ka iPod in TV Apple
Fadlan tixraac tallaabooyinka ay u sii qulquli video ka iPhone in TV Apple. Iyadoo iPod si weyn loo isticmaalaa in lagu ciyaaro music, sidaas daraaddeed, waa inaad hubisid in gudoomiyaha baarlamaanka iyo aqbalana waa AirPlay-karti.
All oo dhan, haddii aad leedahay qalab iPhone ah, waxaad sii qulquli karaan oo dhan photos, videos, music, kulan video, bandhigyada TV iyo xitaa barnaamijyadooda Safari shaashada weyn sida TV si toos ah via TV Apple. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad qabto telefoonka ah android gacanta, aad wax dheeraad ah oo ku saabsan ka eegi kartaa sida loo sii qulquli videos ka qalab mobile android in TV Apple . Maxaa dhacaya haddii aad leedahay qaar ka mid ah files maxalliga ah PC oo doonaya in ay helaan waddo ay u muujiyaan on TV la Apple TV ? Tixgeli Wondershare Video Converter Ultimate, kaas oo kaa caawin kara inaad u xaliyaan dhibaatadan istareexsan. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
> Resource > iPhone > Sida loo sii qulquli Video ka iPhone / iPad / iPod in TV Apple